About us - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
UDamei Kingmech Pump Co, Ltd.ngumkhiqizi wepompo waseChina okhiqiza amaphampu ezimboni. Ukunamathela esimisweni sokuhlinzeka kumakhasimende imishini esezingeni elidinga usizo, inkampani yethu ithuthukise izinhlobo ezicebile zemishini yokudonsa kanye nezingxenye, njengamaphampu e-slurry, amaphampu we-API 610, amaphampu amakhemikhali, amaphampu endle, amapompo kagesi kazibuthe namaphampu wamanzi ahlanzekile. Yonke le mikhiqizo isetshenziswe kabanzi kwezimayini, insimbi, ukumbiwa kwamalahle nokukhiqizwa kukaphethroli, ukukhiqizwa kwamandla, ukuhanjiswa kwamanzi kanye nokuhanjiswa kwendle nokwelashwa nokunye. Ikhwalithi yabo enhle nokusebenza kwabo okuthembeke kakhulu kubasizile ukuthi bazuze ama-trust kanye nomusa kumakhasimende. Okwamanje, ama-valve wempompo yekhwalithi nezinye izinsimbi ezihlobene ziyatholakala kubasebenzisi.
Ifektri yethu yasungulwa ngo-2007 futhi yakha isikali se- "3.13.30.300", okungukuthi, izisekelo zokukhiqiza ezi-3, okuhlangenwe nakho okucebile kweminyaka engu-13, onjiniyela abango-30, amaklayenti athembekile angama-300. Isekelwa ithimba lochwepheshe abanekhono elikhethekile ekwakhiweni kwepompo, prototyping kanye nokuhlolwa, i-DAMEI ikhule ngokushesha okukhulu eminyakeni edlule futhi ithuthukise imishini yokumpompa esezingeni elicebile ngokwanelisa izidingo eziguqukayo zemakethe. Njengoba imikhiqizo yethu idonsela ukunaka okwandayo kumakhasimende womhlaba wonke, siqala ukusungula iqembu lobungoti lomxhumanisi wokuthengisa. Zihle kakhulu ekuhlolweni kwesiza nasekuxazululeni inkinga, zikusiza ngokuhlolwa kwemishini, ukuqondaniswa kwamaphampu nama-motors, ukuthunyelwa kwezinhlelo zokumpompa.
Ihhovisi eliyinhloko lenkampani yethu liseShijiazhuang idolobha, elihlanganisa indawo engaphansi kwe-750m2. Manje, bangaphezu kuka-20 abasebenzi abangochwepheshe abasebenza lapho. Izitshalo ezintathu esizisungulile zitholakala ngokulandelana eShijiazhuang (slurry pump), Dalian (chemical pump), Shenyang (API 610 Petro-pump), ngasinye sakha amaphampu ngokuhambisana ngokuqinile ne-ISO9001, QA / QC standard, CE Mark , Uphawu lwe-IQNet namanye amazinga wezimboni angaphakathi. Zonke lezi zitshalo ezintathu zinezikhungo zokucobelelana ngolwazi zesimanje lapho kunemishini esezingeni eliphakeme yokwenza, ukuhlanganisa, ukuhlola nokunakekela. Imininingwane eningiliziwe ngabo uhlu olungezansi:
1. Ifektri yeShijiazhuang: indawo ejwayelekile yesikhala: 8000m2, amashabhu: 2200m2, abasebenzi: 30;
Ifektri 2.Dalian: indawo ejwayelekile yesikhala: 20000m2, amashabhu: 10000m2, abasebenzi: 120;
3.Shenyang ifektri: workshop: 1600m2, abasebenzi: 30.
4. Ingqikithi: ama-workshops: 13800m2, abasebenzi: 180.
Kusukela yasungulwa, inkampani yethu ibilokhu ihambisana nomthetho wokunikeza izinhlobo ezicebile zamaphampu athuthukile. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kweminyaka yethu ku-R & D nokwenziwa kwamaphampu, sithuthukise izinhlobo eziningi zamaphampu nezingxenye, njengamaphampu enziwe ngezinto ze-hi-chrome kanye ne-A09, amaphampu we-Ti ne-Ti alloy kanye nama-valve, amaphampu we-froth avundlile, i-BB2 enkulu amaphampu aneziteshi zokuzilolonga (ezifakwe amabombo weKingbury) kanye namabheroni e-carbon silicon amaphampu e-VS4. Njengoba ithimba lethu le-R & D seliphumelele ezinkingeni eziningi ezikhohlisayo zobuchwepheshe, manje sesinganikeza amaphampu emakethe athokozela amandla amakhulu we-1000kW nenhloko ephezulu ye-1000m futhi asebenze ngokushelelayo ekushiseni okuphezulu okungama-400 ° C. Amaphampu amaningi wokucaciswa okukhulu azokwakhiwa ngokuzayo, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezikhuphuka kakhulu zemishini yokudonsa.
Ngenxa yekhwalithi yabo enhle, izinhlobo ezicebile kanye nokusebenza okuthembeke kakhulu, imikhiqizo yethu ithunyelwe ezimakethe zakwamanye amazwe, njengeCanada, i-US, i-UK, iFrance, i-Australia, iCzech, iPoland, iNingizimu-Afrika, i-Argentina, i-Indonesia, iPhilippines , Kazakhstan, UAE, Pakistan kanye nokunye ngasikhathi sinye, sesisungule ubudlelwano bokusebenzisana nezinkampani eziningi zomhlaba ezifana ne-Anglo American plc., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton Ltd, Philex Mining Corporation, newmont africa mining Plc., KAZ Minerals, IKazzinc Group kanye ne-India Aluminium mining kanye neFatima Fertilizer Company Limited njalonjalo.
Iminyaka eyisishiyagalolunye edlule ibone imizamo yethu emikhulu ku-R & D nokwenziwa kwamaphampu nezingxenye. Kodwa-ke, ngaphandle kwamathemba akho nokusekelwa okuqinile, besingasoze sathola lokho esinakho noma saba yilokho esiyikho. Ngakho-ke, esikhathini esizayo esizayo, nakanjani sizosebenza imizamo eminingi ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi sinikeze ngezinsizakalo ezicabangelayo nezenzelwe amaklayenti kuwe, siqhubekela phambili endleleni yethu eya empumelelweni enkulu.